Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » LGBTQ » Imidlalo yamaGay ngo-2026: I-Valencia yaseSpain ifumene amanqaku aphezulu
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • LGBTQ • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
by UMario Masciullo-Ekhethekileyo kwi-eTN
Ibhalwe ngu UMario Masciullo-Ekhethekileyo kwi-eTN
UValencia uyenzile. Isixeko saseSpain siya kubamba iMidlalo yeGay kwi-2026. Emva kweenyanga zamalungiselelo kunye nenkcazo yokugqibela yokunyulwa phambi kwe-Federation of Gay Games (FGG) kule veki, i-delegation ye-Valencian ikwazi ukukholisa abagwebi.
Imidlalo yamaGay ngumcimbi wezemidlalo / wenkcubeko othi, ukususela ngo-1982, unikeze indawo eyamkelekileyo kwimidlalo yezemidlalo yoluntu lwe-LGBTQ +.
Umsitho unokuthatha inxaxheba, ukubandakanywa, kunye nokwahluka njengemigaqo yawo esisiseko.
Ubugqatswa bukaValencia bugqwesile abo babekhuphisana neMunich, iJamani, kunye neGuadalajara, eMexico, ejolise ekubeni sisixeko esivulelekileyo, esinabantu bonke, esinentlonipho yeyantlukwano, kunye nesixeko esibandakanyayo.
I-federation yamazwe ngamazwe iye yagqiba ekubeni i-Valencia ithathele ingqalelo ukukwazi kwayo ukusingatha umsitho ubungakanani Imidlalo yamaGay. Oku kuthetha ukuba ikomishini etyelele amaziko ezemidlalo esixeko kwindawo iwuthathele ingqalelo umgangatho weziseko zayo njengowaneleyo.
Ukongeza, iValencia. ISpain, inomtsalane onamandla ngenxa yemozulu yayo eneentsuku ezingaphezu kwama-300 zokukhanya kwelanga ngonyaka, i-gastronomy yayo, kunye ne-ajenda yayo yenkcubeko. Ukufikeleleka kunye nonxibelelwano kunye nesixeko, ukuzibophelela kwaso kuzinzo kunye neendawo eziluhlaza, kwaye ngaphezu kwawo onke amathuba ophuhliso lomntu esi sixeko sinikezela kubo bonke abantu kungakhathaliseki isini, ubuzwe, imeko yomzimba, okanye ukuziqhelanisa, nazo zaxatyiswa.
I-Valencia Gay Games 2026 iya kwenzeka phakathi kukaMeyi noJuni. Lo mnyhadala uza kuhlala nje kwiveki enye kwaye uza kubamba ukhuphiswano lwemidlalo engaphezu kwama-30. Ezi ziquka imidlalo yasekuhlaleni enjengomqhubi wenqwelo-moya waseValencia, umdlalo wesintu obalulekileyo kwimbali nakwinkcubeko yasekuhlaleni, kunye necolpbol, umdlalo wamaqela, emva koko imidlalo yasemanzini enjengokuhamba ngesikhephe, ukubheqa, ipolo yephenyane kunye nekarati. Kuya kubakho nemidlalo efana nebhola yomnyazi, i-volleyball yaselwandle, ihoki, ibhola ekhatywayo, i-softball, kunye nombhoxo, kunye nezifundo zomntu ngamnye ezifana nokubiya, intenetya, igalufa, nokukhwela ibhayisekile, kunye nezinto ezintsha ezifana ne-e-sports kunye ne-quidditch, ukhuphiswano olukhumbuza Harry Potter apho abadlali bakhuphisana ngokubamba umtshayelo phakathi kwemilenze yabo.
Umcimbi, oya kubandakanya imisebenzi eyahlukeneyo yenkcubeko, kulindeleke ukuba utsale iimbaleki ze-15,000 kunye neendwendwe ezijikelezayo ze-100,000, kunye nempembelelo yezoqoqosho kwisixeko esingaphezu kwe-120 yezigidi ze-euro. Ngale ndlela, iMidlalo yamaGay iya kuba ngowona msitho ubalulekileyo wezemidlalo kuluntu lwaseValencia emva kweNdebe yaseMelika.
Uhlelo lweMidlalo yeGay ecwangciselwe u-2022 luza kubanjwa ngo-2023 ngenxa ye-COVID eHong Kong.
UMario Masciullo-Ekhethekileyo kwi-eTN